ढिला उपचारले आँखा गुम्‍नसक्ने | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य ढिला उपचारले आँखा गुम्‍नसक्ने
ढिला उपचारले आँखा गुम्‍नसक्ने
१६ पुष २०७४, आईतवार ०९:४९
स्याङ्जाका २२ वर्षीय सविन बोगटीका दुवै आँखाले जन्मजातै देख्दैनथे । तर उनका परिवारले उनको आँखाको यो अवथा उनी पाँच वर्ष पुगिसकेपछि मात्र पत्तो पाए । आँखाको उपचार गर्ने क्रममा उनी सात वर्ष पुगेपछि मात्र तिलगंगा आँखा अस्पताल पुगे । त्यसको चार वर्षपछि यो अस्पतालमा आँखा विशेषज्ञ डा. लिना वज्राचार्यले आँखामा नानी प्रत्यारोपण गरे । शल्यक्रियाको पहिलो दिन नै आँखाको सेतोपट्टि देखे । भोलिपल्ट पट्टि खोल्दा पहिलो पटक डा. लिनाको मुहार देख्दा उनी चकित परे ।
‘पहिला स्कुल जान्थें, अरुले बेन्चमा बस भन्थे, बस्थें । बेन्च कस्तो हुन्छ थाहा थिएन । देख्नु र सुन्नुमा धेरै फरक रहेछ,’ बोगटीले पहिलो पटक संसार देख्नुको अनुभव सुनाए ।तिलगंगा आँखा अस्पतालले नै २०६८ मा देवे्र आँखामा नानी प्रत्यारोपण गरे । त्यो दिनदेखि सविन दुवै आँखाले संसार नियालेका छन् । उनलाई आँखाको नानी भने नेपाल आँखा बंैकले उपलब्ध गराएको थियो ।
आँखाको नानी प्रत्यारोपण भएकाले गुमिसकेको दृष्टि पाउन सफल भएका छन्, २७ वर्षीय विदुर लामिछाने । विदुरको १४ वर्षकै उमेरदेखि आँखामा ‘कराटोकश’ भन्ने आँखासम्बन्धी रोग लागेपछि उनको आँखाको दृष्टि गुम्दै गएको थियो । लामो समयसम्म आँखाको लेन्स प्रयोग गरे । तैपनि समस्या थपिँदै गएपछि उनलाई तिलगंगा आँखा अस्पतालकै चिकित्सकले नै नानी प्रत्यारोपणको उपचार गरे । १८ महिनाअघि देव्रै आँखामा नानी प्रत्यारोपण गरेका हुन् ।
केही समयपछि दाहिने आँखामा प्रत्यारोपण गर्ने तयारीमा छन् । नानी प्रत्यारोपण हुनुअघि लामिछानेलाई पढ्न मन लाग्थ्यो पढ्न सजिलो थिएन । ‘लेन्स नलगाउँदा केही देख्दिनथें, पढ्न मन लाग्थ्यो भनेजति पढ्न पाउँदिनथें,’ उनले भने । लेन्सको मूल्य महंगा थिए । ६ वर्षपछि लेन्सले पनि काम गरेन । आँखाको नानी प्रत्यारोपणपछि उनले भरपर्दो आँखा पाएका छन् । अहिले उनी एलएलबी पढ्दैछ ।
अरूले मृत्युपछि दिएको आँखाको नानीको कारण आपूmले दृष्टि पाएकाले यी दुवै जना चिनेजानेकालाई आँखा दानको लागि सिकाउँछन् । आँखा बैंकमा फारम भर्न पठाउँछन् । मृत्युपछि उनीहरूको आँखा खेर नजाऊन् र कसैले खेर जान लागेको आँखाको नानी पाए भने आपूmले जस्तै आँखा देख्न पाउन् । ‘मेरो परिवारको सदस्यलाई आँखा दानको लागि फारम भराइसकेको छु,’ लामिछानेले भने । उनीहरू आपूm जस्तै कुनै न कुनै कारणले आँखा गुमाएकाहरूले आँखाको नानी पाऊन् र संसार देख्न पाऊन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् ।
यी दुवै दृष्टि प्राप्त युवाहरू शनिबार नेपाल आँखा बैंकले आयोजना गरेको श्रद्धान्जली समारोहमा सहभागी हुन राजधानी आएका हुन् ।तिलगंगा आँखा कार्यक्रमअन्तर्गत आँखा बैंकले मृत्यु भएका मानिसका आँखाको नानी (क्रनियाँ) निकालेर संकलन गर्छ । दृष्टि गुमाएकामा पालैसँग प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ । बैंकले १२ हजार ५ सय जनामा आँखाको नानी प्रत्यारोपण गराइसकेको छ । बैंकमा ७० हजारले मृत्युपश्चात आँखाको नानी दान गर्ने प्रण गरिसकेका छन् । अहिले आँखा दान गर्नेको संख्या दोब्बर भएको नेपाल आँखा बैंकले जनाएको छ । विभिन्न कारणले दृष्टि गुमाएकाहरू आँखाको नानी प्रत्यारोपणको पर्खाइमा छन् ।
Previous articleअझै बुझाएनन जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण
Next articleशैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गदैं रेखा ट्रष्ट